အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၌မေတ္တာစာပိုဒ်တိုများ - UniProyecta
သင်ချစ်သောစကားစုများကိုနှစ်သက်ပါကပထမအချက်မှာ၎င်းတို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးထားသည်မှာသေချာသည်၊ မသိနားမလည်မှုအကြောင်းရင်းများနှင့်အာရုံကိုလျင်မြန်စွာဆွဲဆောင်လိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့ကိစ္စများကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်သောအမှားတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွဲဖော်နှင့်ဆိုးရွားသောအချိန်များကိုရှောင်ရှားရန်၊ စကားစုသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှန်ကန်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏သိရှိခြင်းကိုသေချာစေရန် virtual ဘာသာပြန်သူကိုသုံးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လို Love Phrases ၁၀၀၊ (အောက်တွင်).
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်၏အစီအစဉ်သည်မေတ္တာနှင့်ခံစားချက်အပြည့်ပါသောတက်တူးထိုးမည်ဆိုလျှင်၊ ဤဘာသာစကားကိုသိသောမှင်ပညာရှင်တစ် ဦး ကိုရရှိရန်ကောင်းပါသည်၊ ၎င်းသည်သင်၏အရေပြားပေါ်တွင်ကျန်တာကိုချခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုပိုမိုယုံကြည်မှုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ အချိန်။ မင်းရဲ့အသက်
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဤအချစ်စကားစုများသည်သင့်အိမ်မက်များကိုအောင်နိုင်ရုံသာမကသင့်ချစ်ရသူနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်။ ကြိုးစားပါ၊ ဤအချက်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါ၊ သင်၏လက်တွဲဖော်သည်သင့်အားမကောင်းမှုအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံသည်။
စိတ်မပူပါနှင့်! သင်၏ခံစားချက်များကိုထူးခြား။ တုနှိုင်းမရသောနည်းဖြင့်ပြပါ။ မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်ကမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပြီးမင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအမှတ်အများကြီးရလိမ့်မယ်ဆိုတာငါတို့သေချာတယ်။ ဤတွင်သင်သုံးရန်လိုအပ်သောကိရိယာများအားလုံးကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့သည် အင်္ဂလိပ်လိုအချစ်စကားစု ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ ကံစမ်းကြည့်ပါ! ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချစ်နဲ့မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်ကတန်ဖိုးရှိတယ်။
1 ဤစာပိုဒ်များနှင့်အတူ seduction အစီအစဉ်
2 သူသို့မဟုတ်သူမအတွက်အကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်စာချစ်စကားစု ၁၀၀
2.1 နာမည်ကြီး "ဂန္ထဝင်" စာပိုဒ်တိုများ
2.6 "ခေတ်ပြိုင်" စကားစုများ
ဤစာပိုဒ်များနှင့်အတူ seduction အစီအစဉ်
မင်းရဲ့ seduction အစီအစဉ်တွေထဲမှာရှိရင် အင်္ဂလိပ်လိုအချစ်စကားစုငါကမင်းကိုအခြားသူတွေကိုသတိမပြုဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဘဲလို့မင်းကိုပြောရမယ်။ သင်ဘာသာပြန်နိုင်သောသူတို့၏အပြောင်မြောက်ဆုံးစာကြောင်းများမှာ -
" (မင်းကငါ့အတွက်တစ်ယောက်တည်း)အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြရန်သာဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိတဲ့စကားစုတွေကိုမချစ်မိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
သူသို့မဟုတ်သူမအတွက်အကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်စကားစု ၁၀၀ ❤
နောက်စာကြောင်း ၁၀၀ ကိုသူတို့၏ဘာသာပြန်ဆိုချက်တွင်တိုသို့မဟုတ်ရှည်အသုံးအနှုန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤကိုးကားချက်များသည်၎င်းတို့သည်ခင်မင်မှု၊ ဂန္တဝင်၊ ဂီတ၊ စာပေ၊ ဒဿနနှင့်အချစ်ဇာတ်ကားများဖြစ်သောကြောင့်သင့်ကိုစွဲမက်စေလိမ့်မည်။
နာမည်ကြီး "ဂန္ထဝင်" စာပိုဒ်တိုများ
ဘုရားတို့တွင်အချစ်သည်လူ၏မိတ်ဆွေ၊ ဆရာဝန်၊ အခြေအနေဟောင်းသို့ပြန်ရောက်သူ၊ နှစ်နှစ်ပြည့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်း၊ အချစ်သည်လူသား၏သဘာဝကိုကုသရန်ကြိုးစားသည်။
စကားလုံးတစ်လုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘ ၀ ၏အလေးချိန်နှင့်နာကျင်မှုအားလုံးမှလွတ်မြောက်စေသည်။ ဤစကားသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မှော်ဖော်မြူလာမပါဘဲအဆိပ်များ၊ သို့မဟုတ်သစ်ဥသစ်ဖုများမပါသောအချစ်စစ်ကိုပြလိမ့်မည်။ သင်ချစ်လိုလျှင်ချစ်ပါ။
ငါ့အတွက်ဒီ့ထက်ပိုစိတ်ချရတဲ့အခြားအလင်းရောင်တစ်ခုရှိတယ်၊ မင်းရဲ့ ဦး တည်ချက်အောက်မှာငါ့ရဲ့အချစ်ကအမှောင်ထဲမှာပျောက်သွားတယ်။
မင်းမျက်လုံးတွေ၊ ညတွေ၊ စိတ်တွေ၊ မျက်ခွံတွေပိတ်လိုက်တဲ့အခါငြိမ်းချမ်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်းနဲ့အနိုင်ယူရမယ်။ ငါမင်းကိုမမြင်ဖူးသေးဘဲနဲ့မင်းကိုချစ်ခဲ့ရင်ငါ့အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာလဲ။
ငါ့ကိုအနမ်းတစ်ထောင်၊ ထို့နောက်တစ်ရာ၊ နောက်တစ်ထောင်၊ နောက်တစ်ရာ၊ နောက်တစ်ထောင်ကိုတစ်ရာပေးပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါတို့ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အနမ်းတွေထောင်နဲ့ချီပြီးပေးတဲ့အခါ၊ မနာလို ၀ မ်းသာလွန်းလို့သူတို့ကိုရေတွက်လို့မရတော့ပါဘူး။
မင်းကသူရဲဘောကြောင်တယ်၊ မင်းမှာသတ္တိနည်းနည်းမရှိဘူး၊ မင်းကဒီကမ္ဘာကြီးမှာမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့တောင်လွယ်လွယ်နဲ့အလိုလိုမရဘူး။ ဤအရာသည်ပျော်ရွှင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်သက်ဆိုင်ရမည်။
မင်းမျက်လုံးဖွင့်ပြီးငါ့ကိုကြည့်ပါ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းလိုအပ်ရင်တောင်ငါနမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ ပြဿနာကအဲဒါဘဲ၊ မင်းနမ်းတာ၊ ခဏခဏလုပ်ရမယ်၊ ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိတဲ့သူတစ်ယောက်
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏နှလုံးသားသည်လျှို့ဝှက်နက်နဲသောသမုဒ္ဒရာဖြစ်သည်။
မင်းဟာငါ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့နာရီတိုင်းမှာမင်းဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိတယ်။ မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ၊ အကြောင်းအရာကမင်းအတွက်ချိုမြိန်တယ်။
အို၊ Sabrina, Sabrina …မင်းငါ့တစ်သက်လုံးဘယ်မှာလဲ။
မကြာခဏဆိုသလိုပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်မဟုတ်ဘဲလူတစ် ဦး ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေသောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
အချစ်ကလေနဲ့တူတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒါကိုမမြင်ဘူး၊ ငါခံစားရတာကြောင့်အဲဒါရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
အချစ်ကိုကောင်းကင် (သို့) သမုဒ္ဒရာ (သို့) အခြားမည်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်မဆိုဖော်ပြနိုင်ပါ။ "ငါတို့မြင်သောမျက်စိသည်မြင့်မြတ်သူ၌ကျူးလွန်သူဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အရောင်အလင်းဖြစ်သည်။ "
ကဗျာ၊ အလှအပ၊ အချစ်ရေး၊ အချစ် - ဒါတွေကမင်းကိုရှင်သန်စေတဲ့အရာတွေပါ။
အမြောက်များပစ်ခတ်မှု? မဟုတ်ဘူး၊ သူကနှလုံးခုန်နေတယ်။
အချစ်ကအောက်ဆီဂျင်နဲ့တူတယ်။ မေတ္တာသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကောင်းကင်သို့မြင့်စေသည်။ မင်းလိုနေတာအချစ်ပဲ!
နေပါ ဦး နှောက်ကိုမေ့ပြီးမင်းနှလုံးသားကိုနားထောင်ပါ။ မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုငါမခံစားရဘူး၊ အမှန်တရားကမင်းဒီကိုဆုံးရှုံးရင်အသက်ရှင်ဖို့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။
အိပ်မက်များသည်ငါ့နှလုံးသားအောက်ခြေကိုပိတ်စေသောဆန္ဒများ၊ အိပ်မက်၌၎င်းသည်အစစ်အမှန်နှင့်အချစ်အကြောင်းအရာအားလုံးဟုထင်ရသည်။ (စင်ဒရဲလား)
အပြင်မှာ ၂၅ ဒီဂရီတုန်းကအေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငါကြိုက်တယ်။ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်စားဖို့အချိန်တစ်နာရီခွဲကြာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြိုက်တယ်။ မင်းငါ့ကိုအရူးလိုငါ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမင်းနှာခေါင်းမှာပေါ်နေတဲ့မျဉ်းကြောင်းလေးတွေကိုငါကြိုက်တယ်။ မင်းနဲ့အတူတစ်ရက်ကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မင်းငါ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေပေါ်မှာမင်းရဲ့အမွှေးနံ့ကိုခုထိရတုန်းဘဲ။ ပြီးတော့မင်းကညမအိပ်ခင်သူနဲ့စကားပြောချင်တဲ့နောက်ဆုံးလူကိုငါချစ်တယ်။ ဒါဟာငါအထီးကျန်ဆန်တယ်၊ နှစ်သစ်ကူးတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ မင်းကမင်းရဲ့လက်ကျန်ဘဝကိုတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ကုန်ဆုံးချင်တယ်ဆိုတာမင်းသိလာတဲ့အခါဒီညငါမင်းရဲ့ကျန်တဲ့လက်ကျန်ဘ ၀ ကိုအမြန်ဆုံးစတင်ချင်တယ်။
29 ။ «
Molly၊ ငါမင်းကိုချစ်တယ်။ - "Ditto"
30 ။ «
"မင်းနောက်ကျတယ်"။ "မင်းလှတယ်"။ "မင်းအတွက်သိပ်နောက်ကျတာမဟုတ်ဘူး"
ဘရုစ်: "မဟုတ်ဘူး၊ ငါသူမကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်၊ အဲဒါကဘာလဲဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါသူမကိုသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံမယ့်သူကိုငါတွေ့ချင်တယ်၊ သူမကိုတွေ့တုန်းသူနဲ့တွေ့ချင်တယ်။ ငါအခုသူတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်။ "ဘုရားသခ။" ဒါကဆုတောင်းတစ်ခုပါ။
မင်းကငါ့ရဲ့အသက်ရှုသံကိုအမြဲနှုတ်ယူတဲ့အရာပဲ၊ စကားလုံးတွေကိုကြိုးစားတဲ့အခါစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့တစ်ခုတည်းသောနာမည်ဘဲ။ မင်းကငါလုပ်တဲ့နည်းဘဲ ...
အချို့ကမိုးသည်မကောင်းဟုပြောသော်လည်းမျက်ရည်များဖုံးနေသောမျက်နှာနှင့် ဦး ခေါင်းကိုမြင့်စေသည့်အရာကိုသူတို့မသိပေ။
ငါမင်းကိုခဏလောက်သွားပါ၊ ငါ့ဘ ၀ ကဟန်ချက်ညီနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်မင်းကိုငါမေးမယ်။ လှပသောကြယ်၊ မျက်ရည်များမှတဆင့်ထွန်းလင်းပါ။
သင်ကဝိုင်နှင့်ပေါင်မုန့်၊ သဘာဝလိုအပ်ချက်တစ်ခုလား။ မင်းကငါ့ကိုနေရောင်ခြည်ဖြာထွက်စေတဲ့မုန်တိုင်းတစ်ခု ...
ငါအမှောင်ထဲမှာရှိနေတယ်၊ ​​မင်းအကြောင်းတွေးတယ်၊ မျက်လုံးမှိတ်ပြီးမင်းအကြောင်းတွေးတယ်၊ ငါမအိပ်ဘူး၊ မင်းအကြောင်းကိုငါစဉ်းစားတယ် ...
ငါလိုချင်တာကဘာမှမရှိဘူး၊ မင်းမျက်လုံးတွေပြန်ဆုံ၊ စာရင်းသွင်းတာကိုရပ်လိုက်၊ ပြန်မွေးလိုက်။
50 ။ မင်းလဲကျသွားတာနဲ့မင်းပန်းတွေကိုစုဆောင်းပြီးဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်သွားရင်မင်းရဲ့လေယာဉ်ပျံပျောက်သွားလိမ့်မယ်၊ ငါကဝင်စွက်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလိုချင်တာကမင်းနဲ့အတူရှိဖို့ဘဲ၊ မင်းနဲ့အတူသံကြိုးမရှိဘူး (Ron ငါတို့စကားတွေမလိုဘူး)
မင်းလဲကျပြီးမင်းပန်းတွေကိုကောက်ပြီးဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်သွားရင်မင်းစိတ်သက်သာရာရလား၊ မင်းလေယာဉ်ပျံကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မစွက်ဖက်ဘူးလား၊ ငါလိုချင်တာကမင်းနဲ့အတူသံကြိုးမပါဘဲမင်းနဲ့အတူရှိနေချင်တာလား။
မင်းငိုအောင်လုပ်ပြီးမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ကအရမ်းခက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘဝတစ်ခုပဲရှိတယ်၊ မင်းရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံး၊ အရာအားလုံးရှိတယ်။
မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်၊ လ၊ လ၊ နှစ်၊ ရာသီ၊ အချိန်၊ အချိန်၊ သာယာလှပသောပြည်၏အမှတ်အသား၊ ၎င်းတည်ရှိရာနေရာတို့သည်မင်းရဲ့လှပသောမျက်လုံးများမှလာသည်။
မင်းလိုချင်ရင်ငါ့ပေါင်မုန့်ကိုယူ၊ ငါ့ရဲ့လေကိုယူပါ၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အပြုံးကိုမဖယ်လိုက်ပါနဲ့။
မင်းဒီကျမ်းချက်တွေကိုဖတ်ရင်သူတို့ကိုရေးထားတဲ့လက်ကိုမေ့လိုက်ပါ၊ ငါမင်းကိုအရမ်းနာကျင်စေမယ်၊ မင်းငါ့ကိုနာကျင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကမင်းကိုသိပ်ချစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပထမဆုံးသောအချစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားတစ် ဦး ၏နောက်ဆုံးအချစ်ကိုနှစ်သက်သည်။
ငါ့ရဲ့အရှိန်ကသမုဒ္ဒရာလိုပဲအတိုင်းအဆမရှိ၊ ငါ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကပိုလေးနက်တယ်။ သင်များများလုပ်လေ၊ နှစ်ခုစလုံးသည်အဆုံးမဲ့သောကြောင့်သင်၌လက်ဆောင်တစ်ခုပိုရလေဖြစ်သည်။
လူအတော်များများကအချစ်ကထွက်ပြေးတဲ့သူတွေကိုအောင်နိုင်တယ်၊ တစ်ချို့ကစောင့်နေတဲ့သူတွေကိုအနိုင်ရတယ်လို့ပြောကြတယ်။ ငါဆိုသည်မှာအချစ်သည်အချစ်၌သာအနိုင်ရသည်၊ ပေးဆပ်ခြင်းမရှိလျှင်ပင်အချစ်သည်လူလုပ်နိုင်သောအမြင့်မြတ်ဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။
အချစ်သည်ဤအရာနှစ်ခုသည်ကာကွယ်၊ ထိတွေ့၊ ဆုံသည်။
အချစ်ဆိုတာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ ဦး တည်ချက်တစ်ခုတည်းကိုရှာနေသည်။
အချစ်၊ ဒီနေ့ငါဘယ်လောက် ၀ င်ငွေရလဲ။ မဟုတ်ရင်မျှော်လင့်ချက်ဆီကို ဦး တည်သွားရင်ငါပိုအသက်ရှည်ဖို့ငါသေရတော့မယ်။
ပျင်းစရာကောင်းတဲ့အချစ်ကဘာလဲဆိုတော့သူကကြံရာမရဘဲမလုပ်နိုင်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုပဲ။
၎င်းသည်ချစ်သူနှစ် ဦး ၏မျက်လုံးများတွင်ဘုရားများအတွက်မျက်မှန်ဖြစ်သည်။
အချစ်ဆိုတာအဲဒါကိုတွေ့ရင်ပြောင်းလဲသွားရင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်တော့ပျောက်သွားချင်လဲ။ မဟုတ်ဘူး! အချစ်သည်မုန်တိုင်းများကိုမကြည့်ဘဲအမြဲတုန်လှုပ်စေသောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချစ်သည်အချိန်တိုတိုနှင့်ရက်သတ္တပတ်များဖြင့်မပြောင်းလဲပါ၊ သို့သော်ပျက်စီးခြင်း၏အစွန်းသို့ပင်ရောက်စေသည်။ ဤအမှားနှင့်ကျွန်ုပ်အကြောင်းသက်သေပြပါကတိုတိုမဟုတ်၊ မည်သည့်လူသားကိုမှမချစ်ခဲ့ဖူးပါ။
ငါအများကြီးမတွေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အများကြီးချစ်တာ၊ ပိုချစ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲ။
ရိုးရိုးသားသားနဲ့ရိုးသားစွာချစ်တဲ့လူတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအပျော်ဆုံးလူတွေပါ။ သူတို့မှာနည်းနည်းရှိကောင်းရှိမယ်၊ သူတို့မှာဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကပျော်ရွှင်တဲ့လူတွေပါ။ ဒါတွေအားလုံးကငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘယ်လိုချစ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တယ်။
အချစ်သည်ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောက်ရွံ့ဆုံး၊ ကူးစက်မှုနှင့်ထိတွေ့မှုအများဆုံးထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အထူးအမျိုးသမီးများသည်ကြံရာပါများနှင့်အပြုံး; အခြားပြိုင်ဘက်များနှင့် acidify လုပ်ပါ။
အချစ်သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ နမ်းခြင်း၏ချိုမြိန်ခြင်း၊ သင်နှင့်နီးကပ်ခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှု
မင်းတစ်ယောက်တည်းရှိနေရင်ငါ mancarti မဖြစ်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းမှာအရာအားလုံးနဲ့အရာအားလုံးရှိနေတဲ့အခါငါမင်းကိုလွမ်းနေဆဲလို့ခံစားရတယ်။
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဘာသာစကား » အင်္ဂလိပ် » အင်္ဂလိပ်လိုအချစ်စကားစု
အင်္ဂလိပ်လို "အချစ်စကားစု" တွင်မှတ်ချက် ၃ ခု
29:2018 pm မှာဇန်နဝါရီလ 7, 10
9:2018 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 5, 19
1:2018 pm မှာမေလ 3, 31